Espaina : Fanohanana Ny Tolon’ny Mpitrandraka, “Eny, Misolo Tena Anay Ry Zareo !” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2012 3:54 GMT
Vakio amin'ny teny Català, English, Français, Aymara, বাংলা, Swahili, Български, polski, македонски, Deutsch, Español
[rohy amin'ny teny espaniola] An'arivony ny olona nidina an-dàlam-be haneho ny firaisankina sy fanohanana ny hetsik'ireo mpitrandraka arin-tany espaniola, teo am-pahatongavana tao Madrid rehefa avy nandeha 400 km avy any avaratr'i Espaina. Ny fihetsiketsehana dia nanomboka tamin'ny 11 ora alina ny talata 10 jolay tao La Moncloa, foiben'ny governemanta, ary nifarana tao Puerta del Sol tamin'ny 2 ora maraina. Ireo mpitrandraka arin-tany dia nandà ireo fepetram-pitsitsian'ny governemantan'i Mariano Rajoya sy ny fihenan'ny fanampiana noraisiny.
Ny fandraisana ny “Marcha Negra” (ny diaben'ny mainty) dia nizotra tao anaty tontolo nampihetsi-po sy sarim-piraisankina. Noraisina tamin'ny tehaka ireo mpitrandraka ireo, teny fankasitrahana, teny fanohanana. Nohirain'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo ny hira fanevan'ny mpitrandraka, heno nandritra ny dian'izy ireo ho any an-drenivohitra. Ireo mpitokona dia gaga tamin'ny haben'ny fanetsiketsehana izay hita ihany koa tany anatin'ny tambajotra sosialy, tamin'ny alàlan'ny fironana fantatra amin'ny anarana hoe : #nocheminera.
Ny Marcha Negra tao afovoan-tanànan'i Madrid, avy amin'i Ismael Naranjo
«Eny, Azo atao !» « Eny, misolo tena anay ry zareo !» « Izao no solontenanay !», amin'ny fangalana ohatra ny fandresena vao azon'i Espaina tamin'ny Euro teo, izany no isan'ny teny faneva re nandritra ny fihetsiketsehana. Zavatra iray no mazava : ireo mpanohana ny mpiasa dia mahatsiaro mirehareha kokoa sy akaiky kokoa ny sarangan'ny mpiasa madinika noho ny mpanao politika na ny mpilalao baolina kitra.
Nanazava ny làlan'i Madrid ireo mpitrandraka ary tsy tamin'ny jiro teny an-kandriny ihany. Betsaka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana no manaiky tanteraka ny anton'ny fikomiana : ireo tsy manaiky lamina, ireo sorena tamin'ny hetsika 15M, ny sokajin-taona rehetra ary avy amin'ny faritra rehetra ao Espaina. Noho ny toe-panahim-pikomiana matanjaka miohatra amin'ny hetsi-panoherana hafa tao Espaina, ny tolon'ireo mpitrandraka dia nanjary ivon'ny fikomian'ny mpiasa madinika, sy fitsipahana an-kitsirano ny fepetra fitsitsiana ny teti-bolan'ny governemanta
Ity lahatsary ity dia maneho ny hetsika firaisankina amin'ny mpitrandraka mitokona (avy amin'i Juan Luis Sánchez):
Eny anaty tambajotra sosialy, maro ireo mamporisika ny mpitrandraka hanohy ny tolony manohitra ny fampihenana ny fanampian'ny governemanta izay mety hitarika fikatonan'ny sehatry ny fitrandrahana. Ao amin'ny Twitter, maro ireo olona maneho ny hafaliany amin'ireo espaniola mpitrandraka, amin'ny alàlan'ny hafany eo ambanin'ny #yosoyminero. Tahaka ny hetsika teo aloha dia ny tambajotra sosialy no manaparitaka be ny vaovao, manoloana ny ambaran'ireo mpampiasa hoe #silenciomediático.
Nitohy tao Madrid ny marainan'ny alarobia 11 jona ny fihetsiketsehan'ireo mpitrandraka arin-tany. Na dia izany aza, nifanohitra amin'ny omalin'iny, nanamarika ny tontolo andro ny fisian'ny fifandonana teo amin'ny CRS sy ny mpanao fihetsiketsehana. Niteraka naratra maherin'ny 76 sy olona am-polony voasambotra ireo fifandonana.